Borussia Dortmund oo isku diyaarinaysa inay u dhaqaaqdo soo xero-gelinta xiddig ka tirsan Kooxda Arsenal – Gool FM
(Paris) 26 Abril 2020. Kooxda Borussia Dortmund ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay xagaaga u dhaqaaqdo weeraryahanka kooxda Arsenal Bukayo Saka.
18-sano jirkan ayaa 29 kulan u saftay dhammaan tartammada kooxda Gunners intii lagu jiray xilli ciyaareedkan 2019-20, isagoo dhaliyey saddex gool isla markaana sameeyey sagaal caawin.
Qandaraaska haatan ee Saka ee garoonka Emirates Stadium ayaa dhici doona bisha June 2021-ka, laakiin warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegeysa in kooxda ka dhisan London aysan weli wadahadallada qandaraasyada u furin xiddigan da’da yar ee bandhiga cajiibka ah ku jira.
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay il gaar ah ku hayso waxyaabaha ku saabsan ciyaaryahanka 19-sano jirka ah ee reer England.
Sida laga soo xigtay Jariiradda The Mirror, Dortmund ayaa isha ku heysa hormarka uu sameynaya xidiga reer England ee Saka, kaas oo boos joogta ah ka haysta safka kooxda kubada cagta Arsenal, taas uu u fududeyn karta inuu dhegeysto dalabyada ka imaanaya kooxda reer Germany.
BVB ayaa sidoo kale la sheegay inay sii hayn karto Jadon Sancho xagaagan, iyadoo faafaha coronavirus uu dib u dhigi karo qorshaha xiddiga heerka caalami ee dalka England uu ugu biirayo Manchester United.